Gafas de Motocross y enduro – ULLER
Kushandisa Cod: NAVIDAD paunenge uchibhadhara kutenga kwako
Mutengo, kuderera kusvika kumusoro
Mutengo, wakakwirira kusvika pasi
Zuva: rekare kuzvino
Zuva: munguva pfupi kusvika kune yakwegura
Yakachena YakachenaZviratidzoBest vanotengesaAlphafabhe, AZAlphafabheti, ZAMutengo, kuderera kusvika kumusoroMutengo, wakakwirira kusvika pasiZuva: rekare kuzvinoZuva: munguva pfupi kusvika kune yakwegura
Dombo Dzvuku / Bhuruu
Dombo Dema / Muchena
Yedu Uller® Motocross uye Enduro Goggles Izvo zvakagadzirirwa kuita kweye 2-mavhiri emitambo munzvimbo ine hasha nenzvimbo dzine matope. Tichifunga nezve ergonomics yavo, vanokwana zvakakwana kumugodhi weheti, vachivimbisa kuti havazofambe panguva yekufamba kwekukurumidza kutyaira kunoitika mukurovedza kwemitambo.
PREMIUM KUPENYU Kunze IZVO ZVESE
Yedu motocross uye enduro goggles zvinogadzirwa uye kune vepamusoro-kuita vatambi. Isu tinogadzira zvese zvigadzirwa zvinosangana nezvinodiwa nechikwata chedu chevatambi vanoedza chimwe nechimwe chezvigadzirwa zvedu vachivatora kuenda padanho repamusoro rekushushikana. Neyese yekupedzisira ongororo, isu tiri kuita inodiwa tekinoroji kugadzirisa kune chigadzirwa, kudzamara isu tigova nechokwadi chekuti vanosangana zvese zvinodiwa kuita kwekuita.
Kuchengetedza maziso nenzvimbo yechiso kwakakosha kana uchidzidzira mhando yemitambo uye zvakare, zvakakosha kuti uve nemaonero akanaka kuitira kuti usakanganisa kududzira nzvimbo paunenge uchikwira.
Izvo zvigadzirwa zveprimiyamu zvepamusoro soro.
KUSVIRA KWETE KUSHANDISA MISANGANO X-POLAR Lens TEKNOLOGY
KuUller® isu tine tekinoroji yepamusoro-soro mumaopics pasi rose. Nemalensi edu Yakakwira Tech Performance Optics X-POLAR isu tinowana tsananguro uye kujekesa pamusoro pechinyakare izvo zvinotibvumidza iwe unoshamisa musiyano uye ruvara. Kupinza kwayo kukuru isu tinokwanisa kuwedzera kupesana uye kuvimbika kwemavara, nokudaro tichivandudza maonero ezvakatipoteredza nerunyararo. Iwo malenzi anogadzirwa aine akanakisa zvinhu kuti awane kukurira kukuru uye kuomarara pamhedzisiro pamwe nekudzivirirwa kwakanyanya kubva kumwaranzi ye ultraviolet. Zvese izvi pasina kuregeredza kureruka uko kunokupa iwe kunyaradzwa kukuru. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve edu X-Polar lenses, click here
ULLER NYIKA - BLOG
ADRIANA BARRIENTOS: MUKUDA NESINO UULLER
Zvita 03, 2021
Bvunzurudzo neCHECHU ARRIBAS CHETE KUULLER!
Zvita 02, 2021
CHII CHINONZI MABOFU MALENZI?
Zvita 01, 2021
ZVINHU 5 ZVINOFANIRA KUZIVA KUTI UGADZIRE MAHARIRO ZVIKAKODZERA
Mbudzi 30, 2021
10 ZVINHU ZVAUNOFANIRA KUZIVA PAMUSORO PAAYMAR NAVARRO
Mbudzi 29, 2021